A Ga-ebupụ okporo ụzọ Tram okporo ụzọ Duzce Istanbul - RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region81 Duzce TurkeyA ga-ebu ụzọ kpochapụ okporo ụzọ Tram dị na Duzce Istanbul Street
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 81 Duzce Turkey, ụgbọ okporo ígwè, General, Black Sea Region, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Turkey, tram 0
A ga-ebute ụzọ ụgbọ ala tram na okporo ụzọ duzce istanbul
Onye isi obodo Düzce, bụ onye doziri ọrụ maka Istanbul Street. Faruk Özlü, gbara bọtịnụ maka mmejuputa oru ohuru. Ihe oru ohuru ohuru nke uzo n'okporo uzo ga - ebu uzo wepu uzo mbu Maka nke a, a ga-emechi okporo ụzọ maka okporo ụzọ sitere na 8: 22: 00 ruo 10: 00: 00:
65. Onye Minista Sayensị nke Gọọmentị, Teknụzụ Mmepụta na Mayor nke Düzce Faruk Özlü pịa bọtịnụ maka mmejuputa oru a kwadebere maka İstanbul Street.
Obodo Duzce na-amalite ịrụ ọrụ na ọrụ ọhụrụ a ga-etinye n'ọrụ na Street Street. A ga-ebu ụzọ bulie okporo ụzọ maka mmejuputa atumatu ọhụrụ a, nke gụnyere okporo ụzọ ụgbọ ala, ndị na-agba ụkwụ na ndị na-eji ịnyịnya ígwè n'okporo ụzọ. N'ime ihe a mere na Düzce Municipal, Düzce Gọvanọ Kọmịshọna Ngalaba Kọmitii fficgbọ njem ngalaba na-ede akwụkwọ.
A ga-ebu ụzọ kwọọ ụgbọ okporo ụzọ maka mmejuputa atumatu ụzọ atọ a na-aga n'okporo ụzọ. Edere ya na akwụkwọ ozi gọọmentị banyere ọrụ a ga-arụ maka ụzọ keke dị iche iche nke a ga-eme ka ekpe gaa n'akụkụ aka nke ngagharị nke okporo ụzọ ahụ, e nyere nkwupụta ndị a: “Ebe ọ bụ na a ga-ahazi ya ma rụọ ọrụ na Düzce Merkez, İstanbul Street site na ime obodo, okporo ụzọ ahụ na-amalite site na 08 / 10 / 2019 ụbọchị na oge 22: 00. 10 / 10 / 2019 ụbọchị na oge 00: Anyị chọrọ imechi 00 (09 / 10 / 2019 na-emechi ụbọchị Fraịde niile ma meghee n'abalị 00: 00 ka okporo ụzọ). "
Obodo Düzce kwuru na ọrụ a ga-arụ n’okporo ụzọ ga-adị n’agbata ụbọchị edepụtara n’isiokwu ahụ, na-ekele ụmụ amaala nwere mmachi n’oge ọrụ ahụ.
Düzce Istanbul Street nostalgic tram tender 04 / 08 / 2017 N'ime ihe gbasara Pedestrianization Project, e wuru okporo ígwè nostalgic na Istanbul Street ka ịfụsa ama Street Istiklal. Ugo nke tram na obodo ga-abụ 1 nde 700 puku TL. Duzce Mayor Mehmet Keles, otu n'ime ọrụ ụmụ akwụkwọ nke Istanbul Street, ka na-aga n'ihu. Okporo ámá, nke a na-eme atụmatụ ime ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ahịa na-emeghe, na-enye ọkpụkpọ nhụjuanya iji nye ikuku nke İstiklal Street. ma nrọ nke mayors si dị 20 afọ unimplemented mkpebi mejuputa oru ngo Duzce Mayor Mehmet Keles, 'Jubilee m ga na-asị' 4 n'okporo ámá emechi ka okporo ụzọ na July. ...
A ga-agbanye 25 puku tọn nnu na okporo ụzọ nke Bornova 23 / 02 / 2015 A ga-agbanye 25 puku mpempe akwụkwọ ntụtụ n'okporo ụzọ nke Bornova: Obodo Bornova nke Izmir mere ihe iji mee ka okporo ụzọ dị n'ógbè ahụ dịghachi. Iji megharia okporo ụzọ ndị a na-eyi akwa, obodo, bụ nke malitere mmemme nke 20 puku tons nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ga-eme ka okporo ụzọ 15 kilomita dị ogologo site na ihu igwe. A ga-emezi 5 puku tọn nke nkedo dị iche iche na isi ihe dị iche iche. Akara ndị ahụ ga-eru ogologo kilomita 4. Obodo nke Bornova ga-ekpebi ụzọ nke asphalts ga-esi nweta 25 puku tọn. A ga-echebara ihe ụmụ amaala chọrọ na ihe ndị a chọrọ n'aka muhtars na mgbakwunye na nchọta nke ndị ọchịchị. Banyere isiokwu ahụ, ọ dị mkpa ka anụ ụzụ dị mkpa
Na Düzce, a ga-ebugharị Istanbul Caddesi maka usoro okporo ígwè 19 / 07 / 2012 Düzce Mayor Ismail Bayram, Istanbul Street mgbe mmechi nke okporo ụzọ na okporo ígwè, kwuru na mgbanwe. Anyị na-aga site na nzọụkwụ, Bayram kwuru Bayram. İsmail Bayram nyochaa ọrụ na mmechi nke Istanbul Street site na iji ngwa mgbochi ụlọ akụ. N'okwu ya gbasara oru ngo a, onye isi oche ahụ kwuru, sị, anyị bụ ọrụ imechi okporo ụzọ n'okporo ụzọ na ịwụnye usoro okporo ígwè. Iji ruo ebe a, anyị kwuru na anyị ga-aga n'ọgbọ a. Anyị na-etinye iwu mgbochi na-adọba ụgbọala. Ugbu a, anyị na-eme nkwadebe ziri ezi maka ngwa ngwa akpa. N'ezie, ha nile choro ntinye ego ohuru. Ọmụmụ ihe n'ọdịnihu nke ọmụmụ ihe ụgbọ okporo ígwè. Nhazi ahụ dị mma O
Duzce Istanbul Street Ebugoro n'ọdụ ụgbọ oloko 04 / 12 / 2018 Ihe dị ka 1.5 afọ gara aga, 'Pedestrianization Project' Istanbul Street na-emechi ugbo ala n'ụtụtụ a, e meghere okporo ụzọ ọzọ ka e mechie ya n'ụtụtụ a. Dursun Ay, onye Mayor nke Düzce, nke anyị natara ozi site na telifon, kọwara na e weghachiri ụzọ ahụ na mkpebi nke Ụlọ Ọrụ okporo ụzọ mpaghara. Mkpebi ahụ kwusiri ike na ọchịchọ siri ike nke ọha na eze na-emeghe oghere nke okporo ụzọ bụ mmetụta. Ọganihu a na-atụ anya ya maka ọnwa ga-abụ onye ọchịchị na mkpebi nke "Ụlọ ọrụ okporo ụzọ mpaghara". A ga-emegheghachiri okporo ụzọ-ga-anọgide na-emeghe ruo ọtụtụ ọnwa, mkparịta ụka na-aga n'ihu n'ọnwa a, e mepere Istanbul Street ọzọ iji gafee ụgbọ ala ahụ. NKWUO NKE NDỊ CHAIRMAN Dursun Ay, onye Mayor nke Düzce, onye anyị natara ozi na ekwentị, kwuru, sị,
Kezọ igwe kwụ otu ebe a ga-ewu site na Iwepu ramzọ ụgbọ okporo ígwè na Düzce 07 / 08 / 2019 Obodo Düzce, Istanbul Street mere nkwupụta banyere ọrụ a kwadebere maka. N'ihi ya, ọdịnihu nke okporo ụzọ ahụ pụtara ìhè. N'ime usoro ọrụ a, a ga-eme nnyocha iji gbaa ndị mmadụ ume iji bọọlụ eme ihe kama ịnya ịnya na etiti obodo. Onye Minista Sayensi, Mmepụta, Nkà na ụzụ na Düzce N’ụbọchị mbụ ọ họpụtara, Faruk Özlü tinyere ụkpụrụ izizi gbasara mmefu ego ma mee ka usoro mmefu ego ahụ dị mkpa. N’oge ntuli aka, Onye isi ala Özlü, onye jidere aka ya maka ọtụtụ oru ndị ọ na-ekwu maka ya, kwagide bọtịnụ maka idozigharị okporo ụzọ Istanbul n’etiti obodo ahụ. Mayor Özlü, onye na-esoro ndị na-ere ahịa, ụmụ amaala na ndị nnọchi anya NGO kwuru mgbe niile.
Na Düzce, a ga-ebugharị Istanbul Caddesi maka usoro okporo ígwè
Duzce Istanbul Street Ebugoro n'ọdụ ụgbọ oloko
Duzce Istiklal Street ga-agbapụ ikuku
A ga-agbanye okporo ụzọ Trasa na Siteler site na Tayyareci Mehmet Ali Street na Selçukbey Street ụzọ
"Green" Ground to Nostalgic Tram Rails na Street Istiklal
Na-aga n'ihu na Bursa ... Nzọụkwụ mbụ Tram Street Cafes na Cumhuriyet Street
Okporo ụzọ nke Istanbul Street Tram Arrangement